mairie-antananarivo – Boriboritany Voalohany: Fanadiovana Faobe – 67ha sy ny manodidina
Boriboritany Voalohany: Fanadiovana Faobe – 67ha sy ny manodidina
administrateur 6 jona 2018 Commentaires fermés
Niara-nientana sy nampiseho ny firaisan-kinany avokoa ireo hery velona rehetra avy ao amin’ny Boriboritany Voalohany ny andron’ny Talata faha 05 Jona 2018 tamin’ny alalan’ny fanadiovana Faobe izay natao teny amin’ny 67 Ha sy ny manodidina.
Nahitana ireo mpiasa rehetra avy ao amin’ny Boriboritany Voalohany, ireo Polisy avy ao amin’ny 7ème Arrondissement, ny Jeunes TIM, ireo solontenan’ny mpivarotra ary ireo avy amin’ny Fokontany manodidina. Ny anton’izao Fanadiovana miverimberina izao dia noho ny fahitana fa maloto ny tanàna, mba hamerenana indray ny hasin’ny Tanànan’Antananarivo amin’ny maha Renivohitr’i Madagasikara azy.
Araka ny nambaran’ny Delegen’ny Boriboritany Voalohany Andriamatoa RAHARIVELO Tiana Harilaza dia tena mahavelom-bolo tokoa ny fahitana ireo vahoaka marobe izay namaly ny antso tamin’ity fanadiovana faobe ity, kanefa na maro aza ny hetsika izay tontosain’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ny fanadiovana ny Tanàna dia zava-poana izany raha tsy mandray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay satria « Izay tsy mandoto dia efa anisan’ny manadio ».
Fanombohana ihany ny androany fa mbola hitohy hatrany manerana ny Boriboritany Voalohany ny hetsika satria dia Antananarivo Madio sy milamina no tanjona.